Kuthetha ukuthini ukuphupha ngezihlangu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngezihlangu
1 Ukufundwa kweMin
Ukuphupha izihlangu sisiseko sobomi bethu. Ifuzisela oko kusixhasayo, njengesiseko. Isenokuba yimeko yeziseko zakho, ukuba ungubani kwaye ukholelwa entwenini.
1 Intsingiselo yokuphupha ngezihlangu
2 Ngaba kulungile ukuphupha izihlangu?
3 Kuthetha ukuthini ukuphupha izihlangu ezintsha?
Intsingiselo yokuphupha ngezihlangu
Ephupheni, abo babonayo okanye banxibe izihlangu ezigugileyo bahlala beziinkokheli zempumelelo kwezentlalo; izihlangu ezitsha nezintofontofo zizibhengezo zokuba uthando olutsha luya kuza ngendlela yakho; izihlangu ezintsha kodwa eziqinileyo nezingonwabisiyo sisilumkiso, lumkela uthando olungeyonyani. Ukuphulukana nezihlangu ephupheni sisilumkiso sokuba ungachithi amandla akho kunye nemizamo yakho kumntu ongenamveliso okanye umsebenzi. Ukukhanya kweembadada ephupheni luphawu lokuba uhambo luzakwenzeka kungekudala. Ukubona okanye ukwenza izihlangu yinto elungileyo, uya kufumana isithembiso somsebenzi esikhethekileyo, ungasivumeli ukuba sibaleke. Ukunxiba izihlangu ephupheni luphawu lokuba imeko yezemali iphuculwe. Ivenkile yezihlangu xa ivela ephupheni yinto engumqondiso wobomi obude nobonwabisayo.
Ngaba kulungile ukuphupha izihlangu?
Ukuphupha ngezihlangu kunentsingiselo eyomeleleyo ethetha ngesiseko sobomi bakho, amanyathelo owathathayo kunye neendlela ozikhethileyo ukuba uzilandele. Chonga ukuba zeziphi iziseko kwaye ulandele izikhombisi zentliziyo yakho.
Kuthetha ukuthini ukuphupha izihlangu ezintsha?
Ke ngoko, ukuphupha izihlangu kuhlala kunxulunyaniswa nobomi bokuziphatha, amaxabiso kunye nokuziphatha, ezizezona zinto ziphambili kubomi babantu. Eli phupha likwanxulumene nobomi bakho boluntu, okanye mandithi, ngendlela okhokela ngayo ubomi bakho kunye nolwalamano lwakho.
Kuthetha ukuthini ukuphupha Ukhozi?
Matshi 8, 2020
Kuthetha ukuthini ukuphupha ikati?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ulwandle?
Imihla, izibonelelo kunye nendlela yokufaka ukutya
Kutheni ukutya okune-carb ephantsi kungasebenzi kuwe